Helical waya inoumba musangano - Yuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
Imwe yezvigadzirwa zveJera fiber ndeye Helical line fittings. Isu tinogadzira zvigadzirwa neyakaitwa yehelical waya inoumba, kukotama, kumonyanisa, jecha uye kunama kwekuvhara.
In helical waya achiumba workshop, tinobudisa zvinotevera zvigadzirwa:
-Insulator preformed zvisungo izvo zvinosanganisira zvakaputirwa zvisungo, mativi zvisungo, spool zvisungo, zvepamusoro zvisungo
-Kufa- kumagumo mukomana kubata iyo inosanganisira ADSS tambo mukomana kubata, tambo tambo mukomana kubata, ACCC, ACSR mukomana inobata
-Suspension inobata iyo inosanganisira kuturika inobata neamor matanda uye ADSS helical kuturika zvinosungisa
Isu tinoitawo kutsvagiridza nekugadzira zvigadzirwa zvezvigadzirwa zvakagadzirwa neiyi tekinoroji.
Iyo mbichana zvinhu zve helical mutsara fittings ndeyesimbi senge inopisa inopisa kwakakurudzira simbi, isina simbi simbi, aluminium, aluminium simbi yakarongedzwa nemhangura. Takatarisa zvese zvinyorwa zvinoenderana neyakajairwa ISO 9001: 2015 uye JERA yemukati yekuongorora muyedzo.
Kuburikidza nehunyanzvi uhu, jera mutsara unokwanisa kugadzira zvigadzirwa zvitsva kana kugadzirisa zvigadzirwa zvazvino zvigadzirwa kuti uve unokwikwidza, uye unokwanisa kupa vatengi vedu zvipo zvinonzwisisika uye mhando yepamusoro.
Chinangwa chedu ndechekupa mhinduro yakazara yeiyo yepamusoro tambo inosunga uye kumisa. Isu tinogadzira zvese zvinoenderana zvigadzirwa kune vedu vatengi mukuvaka kweterevhizheni network uye masimba ekuparadzira masystem. Kana iwe uine izvo zvinoenderana zvigadzirwa zvigadzirwa, ingo sununguka kutumira email kana kufona isu.